Ngabe Imithombo Yezokuxhumana Isifinyelele Emandleni Akhona Okusha? | Martech Zone
NgoMgqibelo, Januwari 11, 2014 NgoMgqibelo, Januwari 11, 2014 Douglas Karr
Ukukhula kwemithombo yezokuxhumana eminyakeni embalwa edlule bekungafani nanoma yini esake sayibona. Phakathi kokuhamba, empeleni, bekuwukukhangisa kwezokuxhumana. Njengoba sibheke ku-2014, angikwazi ukuzibuza ukuthi - njengoba ngokushesha njengoba imithombo yezokuxhumana ikhuphukile - manje isifinyelele amandla ayo amasha. Angisho ukuthi izinkundla zokuxhumana zikhona engathandwa kangako futhi akusho ukuthi ukumaketha ezinkundleni zokuxhumana ayisebenzi kahle, akulona iphuzu lami lelo. Engikushoyo ukuthi angijabule kakhulu ngalokho okungahle kwenzeke ngokulandelayo.
Idatha enkulu namathuba wokukhomba nokukhangisa azoqhubeka nokwenza kahle ubuchwepheshe (noma ukubonakalisa). Izinto ezibalulekile zokusebenzisana zilapha, noma kunjalo… sinengxoxo, izithombe, nobuchwepheshe bevidiyo. Sine ukuhlanganiswa mobile kanye tablet. Sinomthelela wokuqamba kanye nemithombo yezokuxhumana ekubonakaleni komkhiqizo jikelele. Sivele sinezinye amaqembu eminyaka elahla uFacebook, abafana abakhulu ebhlokini futhi ngokusobala, ipulatifomu eyinkimbinkimbi kakhulu futhi ecebile.
Sesivele sinokuqapha komphakathi, ukupheliswa komphakathi, ukushicilelwa komphakathi, ukuhlangana komphakathi, ukwesekwa kwamakhasimende omphakathi, ezentengiselwano, ukubika komphakathi… kukhona engikuphuthele? Amapulatifomu abe yinkimbinkimbi kakhulu futhi manje asehlanganiswa namanye amathuluzi okuphatha okuqukethwe, ukuphathwa kobudlelwano bamakhasimende kanye nezinhlelo ze-ecommerce.
Isikhathi sinikeze nezifundo ezinhle kakhulu esizifundile. Izinkampani manje ziyaqonda indlela yokubhekana nabahlambalazi be-intanethi ngempumelelo. Izinkampani ziyazi ukuthi zenzeni gwema ezinkundleni zokuxhumana - noma kanjani thatha izihloko ezisematheni ngayo. Siyazi ukuthi kungaba yindawo ekhipha ifayili le- okubi kakhulu kubantu abathukayo.
Ngokuphathelene nokuziphatha kwami ​​kwezenhlalo nokwenza kwami, ngazabalaza iminyaka eminingana ukuzifundisa kuzingxenyekazi ezintsha nokusebenzisa amasu wokusebenzisa ngokuphelele amapulatifomu amanje. Ngilungise ukugxila kwami, ngisebenzisa imithombo yezokuxhumana ukuxoxa nokuphinda okuqukethwe kwami, kepha njalo ngishayela abantu babuyele kusayithi lethu ukuze bahlanganyele ngokuphelele futhi baguqule. Izinqubo zami zansuku zonke, zamasonto onke, nezanyanga zonke zokuxhumana nabantu - ngicabanga ukuthi - ziba yinto ejwayelekile manje.
Ukuqhubekela phambili ngifuna ukwenza ngcono ukwakha umphakathi ngaphezu kokwakha izethameli nje. Angifuni ukukubonisa amathuluzi amasha, ngifuna futhi ukuxoxa ngawo nawe. Kepha lelo thuba selivele likhona namuhla - akuyona into engiyibona iguquka ngonyaka olandelayo.
Ngikhathazekile ngalokhu? Ngabe ubona umfutho owengeziwe nokukhula kubuchwepheshe bokumaketha ezokuxhum kulo nyaka ozayo? Ngabe usalungisa isu lakho lemithombo yezokuxhumana noma kuyinto ejwayelekile? Ingabe likhona ithuluzi elisha lapho olidingayo? Noma sinawo wonke amathuluzi esiwadinga namuhla?
Tags: FacebookezineGoogle +LinkedInTwitter
Jan 13, 2014 ku-9: 04 AM
Ibhulogi yakamuva eHarvard Business Review iphakamise ukuthi ithonya eliqhubekayo lezokuxhumana lizozifaka ekuziphatheni kwansuku zonke kweningi labasebenzi elizokhulisa umyalezo wokumaketha ngemithombo yezokuxhumana. Lokhu kukhuliswa, ngombono wami othobekile, kungaba yindlela nje yokushintsha imodeli yebhizinisi eqhutshwa manje ibe yimodeli yebhizinisi eqhutshwa abantu.
Imithombo yezokuxhumana izoqhubeka nokuthonya imakethe njengoba ucingo, umsakazo, i-TV, njll kwenziwe futhi kuqhubeka nokwenza kanjalo.
2013 - Abathonya Abaphezulu Abathengisi Abangu-25 - http://labs.openviewpartners.com/top-sales-influencers-for-2013
Jan 14, 2014 ku-5: 56 AM
Ngikholwa ukuthi imithombo yezokuxhumana izoqhubeka nokuthonya hhayi kuphela imakethe, kepha nempilo yansuku zonke.
Engikulindele ku-2014, nokho, ukukhuphuka kwamanethiwekhi omphakathi angaziwa, njengeDuvamis neChronicleMe.
UDuvamis, ngokwesibonelo, unikeza imiqondo nemisebenzi emisha, kuhambisana nokusetshenziswa kwabathengi futhi
funa indawo ephephile yokuxhumana online.